Matipi evashandisi veMacOS vanoda kutanga paLinux | Linux Vakapindwa muropa
Vamwe Vashandisi veMacOS vanofunga kuti vakadyiswa kubva papuratifomu yeApple uye sarudza kuyedza mamwe masisitimu anoshanda. Vashandisi veimwe chikuva vanoenda kune chimwe chinhu chakaitika uye chichaitika. Imwe yemikana iripo ndeyekuti mushandisi weiyo Cupertino system afunga kutanga dhijitari "hupenyu hutsva" mune GNU / Linux distro.
Panguva iyoyo, nemutungamiri uyu unogona kuva naye mugwagwa wakatsetseka kutanga kunakidzwa nehunhu hwePenguin Platform pasina kuwanda kwekuedza. Iine dzakateedzana shanduko dzauchazoona zvakajeka uye nemazano ekuti kugadzirisa kwako kukurumidze uye nyore ...
1 Zvikonzero ...
2 Kugadzirisa kusahadzika kwako kuchinjika nekukurumidza
2.1 Kugovera kupi kwakanyanya kutanga?
2.2 Pane here zvinotsiva kuApple maapplication?
2.3 Ko kana pasina imwe nzira? Ndinogona here kushandisa yangu yemuno macOS app paLinux?
2.4 Ndiri kuwana makomputa neLinux pre-yakaiswa seMacOS?
3 Zvimwe zvekufunga zvaunofanira kuziva
Ngaave aripo zvikonzero zvinoverengeka umo mushandisi afunga kungochinja kamwe kamwe kubva pane imwe sisitimu yekushandisa kuenda kune imwe. Asi chero zvazviri, iwe unofanirwa kuziva zvishoma zvinhu nei uchifanira kusarudza GNU / Linux pamusoro peMacOS:
Centralization inokushungurudza iwe? Edza siyana siyana. Ipo macOS iri yakavharwa inoshanda sisitimu ine budiriro inodzorwa chete neApple, padivi reGNU / Linux hapana zvirambidzo zvakadaro. Vashandisi vane zvakawanda zvakasiyana siyana zvavanosarudza kubva, nekuti Linux inongova tsanga inoshayikwa nemamwe "zvidimbu" kuti ive yakakwana sisitimu yekushandisa. Nokusarudza zvidimbu izvi nekuzviunganidza, unogona kuve nematanho akasiyana ekugutsa zvido zvakasiyana zvakanyanya. Pakati peaya mavhenekero iwe unowanawo mamwe akatariswa kunyanya kutaridzika kunge macOS, saka unogona kuzviwana iwe "uri kumba" kana iwe uchibva pakombodhi iyoyo.
Kugadzikana, kusimba, uye kuita. Iko hakuna kuramba kuti macOS iri zvakare yakagadziriswa nzira ine kugadzikana kwakanaka. Kune rimwe divi, kune maLinux distro ayo akatarisana kuti awane kuchengetedzeka kukuru, kugadzikana, kusimba, pamwe nemwenje distros kuitira kuti usarase zvigadzirwa zvehardware zvaunazvo. Aya ma distros ane yakaderera kwazvo CPU nguva uye ndangariro kushandiswa, saka ivo vanogona kukubatsira iwe kunyangwe neyekare Mac iyo iwe yaunoda kuenderera uchishandisa kana shanduro nyowani dzeMacOS dzisisichazvitsigire.
Save. Izvo hazvifanire kurambwa kuti kune mahara maapplication muMacOS, asi izvo zvakajairika iri sisitimu iyo software yacho inowanzo kudhura uye uko isiri yakachipa kuchengetedza sevamwe.
Chengetedzo. Ose ari masisitimu akachengetedzeka, ichokwadi, nekuti ese ari maviri kubva kurudzi rune simba senge Unix. Panzvimbo iyoyo, Linux yakatonga nyika yemaseva uye supercomputer ine simbi chibhakera, ndosaka mapurojekiti mazhinji anonakidza ekuchengetedza abuda kudzivirira masisitimu aya. Nezvese izvo zvinhu zvaunazvo unogona kuita kuomesa kuita kuti system yako ive yakachengeteka sezvinobvira. Uye zvakare, sezvo iri yakavhurwa sosi iwe unogara uine masosi aunogona kuitira kuti usavimbe kana ivo programmers vakaisa nemaune madhoo ekumashure kana kana vari kuita chimwe chinhu nenzira yakavanda yausingade ... Chinhu icho mu macOS hazvigoneke nekuti iri kodhi yakavharwa. Uye hongu, vanogona zvakare kunzvenga madhoo ekumashure uye kuve nematambudziko muLinux, asi iwe unogona kugara uchivimba nechimwe chinhu chakavhurika kuzviuru zvemeso kupfuura chimwe chinhu chakavanzwa kubva pamikova kunze kwekambani inochikudziridza.
Kuvanzika uye kusazivikanwa. Apple yave ichirumbidzwa zvakanyanya nekushandisa kwayo yakavanzika data iyo yainotora kubva kune vashandisi vayo. Uye kunyangwe ivo vachizvikudza kuti vane gwara rakanaka mune izvi, ichiri yakavharwa software iwe yausingazive chaizvo zvazviri kuita: kwete zviri nani kana zvakaipa. Mune mamwe ma distros pane izvo zvavanodaidza kuti "telemetry", uye mushandisi dhata inogona zvakare kuunganidzwa, asi iwe unogara uine rusununguko rwekusarudza imwe distro isingaite uye kunyange kugadzira yako distro kubva pakutanga kana iwe uchinyanya kufunga nezve idzi nyaya .. .
Kuita somunhu. macOS inogona kugadziridzwa, hongu, ichokwadi. Kune macOS kune maturusi mazhinji ekugadzirisa zvimwe. Hapana munhu anozviramba, asi iwe hauzombove nekwaniso yekugadzirisa iyo iyo Linux inayo. Kwete chete nekuda kwenhamba yedistros, desktops, uye dzimwe nzira dzinowanikwa kune mushandisi, zvakare nekuda kwehuwandu hweshanduko dzinogona kugadzirwa uye kana kubata iyo kodhi kuti ichinje kuti ive yako yaunoda ... Hapana munhu anorova hackable! Ndosaka ichichinjika uye iwe uchiona ichichinjika kune zvese zvese, kubva kuhurongwa hwekutonga robhoti, zvishandiso, zvakadzamidzirwa, kune satellite, kuburikidza nenhare mbozha, smart TV, PC, mota, uye kunyangwe nzvimbo dzedata. ine maseva akakura kwazvo uye makomputa.
Development. Apple's system isarudzo yakanaka yekuvandudza mimhanzi, mafirimu, graphic dhizaini, webhu dhizaini, nezvimwe. Hapana anozviramba. Asi zvakare ichokwadi kuti iwe unogona kuita zvese izvo muLinux futi, uye yekupedzisira inokunda mune chimwe chinhu senge software kusimudzira. Kune huwandu hukuru hwevanyori vanyori, maIDE, maginjini enjini, maturusi uye mitauro yekuronga pazvigunwe zvako zvemapuratifomu akasiyana.
Vhidhiyo mutambo. macOS iri zvishoma pamusoro peLinux muhuwandu hwemavhidhiyo mazita emitambo aripo. Asi ichiri nzira refu kubva paWindows, inova ndiyo inonyanya kujekesa. Nekudaro, Linux iri kuramba ichinyanya kufanana ne macOS, uye kana iwe ukawedzera kune izvo kuti iwe une mapurojekiti akanaka seProton yekutamba mazita eLinux, ipapo misiyano inopararira uye yoita iyo inonakidza kwazvo chikuva chevatambi vanotiza kubva kuWindows. Uye macOS ye zvikonzero zvakasiyana.
Zviri pachena une izwi rekupedzisira, uye unofanira kutonga kana zvikonzero zvakakwana zvinogona kukubatsira kuti pakupedzisira usarudze Linux senzira huru yekushandisa.
Uye ini zvakare ndinokuudza kuti vamwe vashandisi vanobva kuMacOS neWindows vanopera kudzokera kumasisitimu ako ekare ekushanda. Uye kunyangwe vazhinji vavo vachiita zvimwe zvikonzero, chikamu chikuru chavo vanozviitira nyore uye tsika. Uye iwe unoziva kana iwe ukajaira kune chimwe chinhu zvinonetsa kubvisa iwo maitiro, zvimwe chete zvinoitika pano. Asi ini ndinokuvimbisa iwe, kana iwe ukaipa iyo yakareba mukana wakakwana kuti ujairire Linux, vazhinji havadi kudzokera kumashure ...
Kugadzirisa kusahadzika kwako kuchinjika nekukurumidza
Chokwadi, kana iwe watove wafunga kusarudza kuchinjira kuLinux uye kusiya macOS, uchave uine akateedzana e kusahadzika kunoda mhinduro...
Kugovera kupi kwakanyanya kutanga?
Chokwadi ndechekuti inyaya yekuravira kupfuura chero chinhu chipi zvacho. Pamwe nyaya yako ndeyekuti wapunyuka kubva ku macOS nekuti haufarire maratidziro ayo uye urikutsvaga chimwe chakasiyana, mune izvo, ungangoda kushandisa mamwe ma distros anoita kunge anga asinganzwisisike senge iwo ane KDE Plasma, kana imwe mamiriro edesktop.
Asi kana iwe uchida nharaunda ine hushamwari kwauri uye nekuwedzera seako macOS kuitira kuti kugadzirisa kwako kukurumidze, saka pane runyorwa rwema distros aungade.
elementary OS: Iyo ine yakafanana nedesktop nharaunda inoedza kutevedzera Mac.Uye zvakare, yakavakirwa paUbuntu, saka ine zvese zvakanakisa zveiyi distro pamwe neayo graphical shell yakavakirwa paGNOME uye zita rayo ndiPantheon. Iine Frank dock yayo iwe unonzwa kunge paMac uye zvimwe zvakawanda zvinoonekwa zvinokuyeuchidza nezvake. Naizvozvo, ndiyo yekutanga distro yandinokurudzira kuti iwe uedze kana uchibva pasi rino. Dhawunirodha yekutanga OS.
Fenix ​​OS: Ichi chirongwa cheSpanish chazvino, uye chinogona kushandura kutaridzika kwayo zvine mutsindo kutevedzera nharaunda dzakasiyana dzeWindows neMac.Ungatosarudza pakati peshanduro dzemazuva ano dzeMacOS kana zvekare. Dhawunirodha Fenix ​​OS.
Zvimwe: kune humwe hunhu iwe unogona zvakare kufarira distros senge Linux mint kuti zvive nyore; Ubuntu nekuda kwekuti ihwo hushamwari hwakadii uye huwandu hwesoftware mapakeji, madhiraivha uye rubatsiro rwaunowana; uye kunyange Fedora nekusimba kwayo uye kugadzikana.
Pane here zvinotsiva kuApple maapplication?
Ichokwadi ndechekuti muLinux mune dzakawanda dzimwe nzira. Muzviitiko zvakawanda chakaoma hachisi kuwana software inotsiva, chinhu chakaoma kusarudza pakati pesarudzo dzakasiyana dziripo nenhamba yavo. Chinhu chakanaka.
Naizvozvo, pano ini ndinokuratidza mamwe eanonyanya kufarirwa echinyakare macOS maapplication uye avo dzimwe nzira muLinux:
iTunes- Unogona kutsiva neRhythmbox, Banshee kana vatambi venhau veAmarok.
safari: Kune huwandu hukuru hwewebhu mabhurawuza eLinux, senge Chrome, Firefox, uye yakareba etc.
Automator: iyi Anwendung kuita mashandiro emabasa ane akati wandei mamwe maLinux, kubva pane zvinyorwa modhi kusvika graphical maapplication. Iyo inokugutsa zvakanyanya ndiXnee.
iWork: yehofisi otomatiki unogona kuwana LibreOffice, OpenOffice, Calligra, uye kunyangwe Google Docs neMicrosoft Office online.
iGaragebandKune zvakawanda zvakafanana zvigadzirwa zvinonakidza, chimwe chazvo Audacity.
iPhoto: yekutarisira mifananidzo iwe unogona kushandisa F-Spot, XnView MP, kana Shotwell yangu yaunofarira.
iMovie- Ine dzimwe nzira dzayo senge OpenShot, Kino, Avidemux, Kdenlive, nezvimwe.
Tarisa: unogona kutsiva Beagle pakati pevamwe ...
Apple Kutaura: unogona kuedza Netatak, Pidgin, Jitsi, kana vatengi senge Teregiramu, nezvimwe.
KukurumidzaTime- Iine zvimwe zvinotsiva zvakanaka seXine, VLC, Kaffeine, nezvimwe.
iChat: unogona kushandisa Ekiga.
iCal: shandisa iyo yega GNOME kana KDE Plasma, pamwe nevamwe vakaita seGoogle Calendar.
Ko kana pasina imwe nzira? Ndinogona here kushandisa yangu yemuno macOS app paLinux?
Kunyangwe ese masystem ari kubva kumhuri yeUnix, iwo haana kufanana. Ivo vanosiyana maererano neABI yavo uye nekudaro hapana kuenderana kwakanangana between software yakagadzirirwa MacOS uye iyo yakagadzirirwa Linux, sezvo pasina musiyano pakati pezvazvino Windows maapplication.
Asi sekufanana neWindows uye chirongwa cheWine, kune zvakare chirongwa chekushandisa a kugadzikana rukoko kuti iwe ugone kumhanyisa ako aunofarira echinyakare macOS maapps paLinux. Yakatumidzwa zita Darling uye ndezvemahara. Nayo unogona kunakidzwa nemamwe macOS maapps paLinux sekunge iwe uri kushanda paMac pachayo.
Ndiri kuwana makomputa neLinux pre-yakaiswa seMacOS?
Hongu, kune vanoverengeka vagovera vane Laptops, AIOs, uye Desktops kupi kwekusarudza neyaunofarira distro yaunofarira yatove-isati yaiswa. Imwe yemhando dzakakurudzirwa ndeyeSpanish Slimbook. Kwete chete iyo inopa iyo yakanakisa michina ine yepamusoro-soro mashandiro, ivo zvakare vane emhando yekupedzisa uye yakanyatso gadzira dhizaini kuti iwe usatombo cherekedza mutsauko neMac ... hazvo, chete mumutengo, nekuti iwo anodhura zvakanyanya .
Zvimwe zvekufunga zvaunofanira kuziva
Unofanirwa kufunga nezvezvimwe zvinhu zvaunowana mukuchinja kwako. A shanduko izvo zvichave zvakapfava kana iwe uchiziva zvese izvi:
HFS / HFS +: macOS inoshandisa iyi FS iyo isingaenderane neWindows, uye kana iri yeLinux. Kune rimwe divi, mukuda kwako ini ndinokuudza kuti inogona kutsigirwa muLinux kuti ishande nemadhiraivhi akaomarara uye zvishandiso zvendangariro zvawakarongedza neiyo fomati. Naizvozvo, paizove pasina dambudziko kuramba uchishanda nedhata rako.
Kanganwa nezveDMG: zvirokwazvo wajaira .dmg mapakeji iwe aunofambisa ku hard disk icon yekuisa kana kune iyo marara inogona kudzima. MuLinux iwe unowana yakasarudzika sisitimu sisitimu nekuda kwenhamba huru ye distros uye mapakeji mamaneja. Naizvozvo, iwe unogona kuwana akasiyana mapakeji senge DEB, RPM, sosi kodhi tarballs kuumbiridza uye kuisa, zvinyorwa zvekuisa mamwe mapakeji, .mhanya uye .bin mabhainari. Asi kana iwe usiri kuda kuomesa hupenyu hwako, unogona kushandisa epasirese mapakeji senge snap, Flatpak, uye AppImage kana kushandisa zvakananga software masisitimu kana ezvitoro zveapp kuti uise nekamwe chete nyore uye dzivisa kushandisa iyo terminal.
Bash: macOS inoshandisa Bhash seye default Shell, uye mune ino pfungwa haungawane mutsauko. Mazhinji eLinux distros anoshandisa zvakafanana ... Zvakare, kuve Unix, syntax nemirairo zvichave zvakafanana mune dzakawanda zviitiko kana zvakafanana (unogona kuchinja mamwe ma parameter uye sarudzo, asi zvimwe zvishoma). Rangarira kuti coreutils inouya kubva BSD nyika uye kwete kubva kuGNU, ndosaka aya mutsauko mushoma. Semuenzaniso, pachinzvimbo che-sed -E iwe unofanirwa kushandisa sed -ro zvinhu zvakadaro.
Dhairekitori remunhu: zvese muLinux uye mune macOS iwe unayo dhairekitori rako rine zita rako. Icho chinhu chakagarwa nhaka kubva kuUnix uye zviri mune zvese zviri zviviri. Musiyano uripo ndewekuti mune macOS iri muchikamu chikuru uye mukati meVashandisi dhairekitori uye muLinux inogona kunge iri muchikamu chikuru kana mune imwe yakazvimiririra / yekuparadzanisa imba.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Matipi evashandisi veMacOS vanoda kutanga paLinux
Kukanganwira? Unogona here kuenzanisa Garage bhendi ne Audacitiy? Mune yekutanga iwe unogona kurodha midis, iwe une serial zviridzwa, uye zvakare kana chirongwa icho pachacho chisingawani chinoenderana chimbo, kurodha pasi kubva paInternet uye mune audacity?
Hapana shamwari, kushinga kune yakawanda yeWAV / MP3 odhiyo edhita pane yakazara MIDI sequencer segaraji, ivo havana chekuita nemumwe.
Mhoro: Semunhu anofarira mimhanzi, ndinofunga wakarurama. Uye zvichave zvakafanira kuona kana mumwe wedu achipindura kwatiri uye anga akavhiringidzika achireva Ardor, izvo zvakaitika kwandiri pane imwe nguva.
Zvakadaro, ndanga ndichitsvaga yakanaka Linux dzimwe nzira kwenguva yakareba uye hapana kana imwe chete. LMMS, semuenzaniso, inoita kuti utambe midi zvakanaka, asi haina yakanaka wave wave. Ardor iri kushayikwa musarudzo, asi inogona kushanda mune dzimwe nguva. Ini ndinofunga kuti muLinux, kuti uite mimhanzi iwe unofanirwa kubatanidza akati wandei zvirongwa izvo GarageBand inosanganisira mukati mawo.
"IGarageband: Kune akawanda akafanana zvigadzirwa zvinonakidza, imwe yacho ndeye Audacity."
Kungoverenga izvo zvinoratidza kuti iwe hauna zano, Audacity haina chekuita neGarageband, imwe ndeye edhiyo edhisheni uye imwe ndeye MIDI sequencer, ini ndaifunga kuti uchaenda kuisa Rosegarden / LMMS / Muse kana Arisa Mestosa yaisanganisira Ardor asi kwete audacity chaizvo
Firefox 78, vhezheni ine zvakawanda zvinogadziridzwa uye nerutsigiro rweWebRender, uninstaller nezvimwe